မြန်မာပြည် သွားပြီလား | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« The BEST solution given by the learned Rakhine Monk
Is Myanmar going down the drain? »
Aung Tin: မြန်မာပြည် သွားပြီလား
ကျနော့အမြင်မှာတော့ မြန်မာပြည်ဟာ မြောင်းထဲကို အရှိန်နှင့် ဒလဟော ထိုးကျနေပြီလို့ ထင်တယ်။ ပိုဆိုးတာက မိုက်မိုက်မဲမဲ မြောင်းထဲတွန်းချသူတွေကို မတားဆီး၊ မကန့်ကွက်တဲ့အပြင် မသိကျိုးကျင်ပြုနေတဲ့သူတွေက ထုနှင့် ထည်နှင့် ရှိနေရုံတင်မက မသိမသာဖြစ်ဖြစ်၊ သိသိသာသာဖြစ်ဖြစ်၊ တိုက်ရိုက်ဖြစ်ဖြစ်၊ သွယ်ဝိုက်၍ဖြစ်ဖြစ် အားပေးအားမြှောက်နေသူတွေနှင့် မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောက တစ်ခုလုံးမှာ ပြန့်နှံ့နေတယ်လို့တောင် ထင်မှတ်စရာဖြစ်နေပါပြီ။ နိုင်ငံရေးအရ မှန် မမှန်(Political Correctness)ကို အမြဲထောက်ပြနေတတ်တဲ့ နိုင်ငံရေး ပဏ္ဍိတ်တွေကလည်း အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင် ဆွံ့အနှုတ်ပိတ်နေကြတယ်။ ဒါက ကောင်းတဲ့ အလားအလာ၊ ကောင်းတဲ့ နိမိတ်(omen)တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ သေချာလွန်းပါတယ်။
တောင်အာဖရိကမှာ နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားခဲ့တဲ့ Apartheid ဆိုတာကို ကျနော်တို့အားလုံး သိကြပါတယ်။ လူတွေကို မျိုးနွယ်အရ သီးခြားစီ ခွဲခြားထားခြင်း(Segregation)ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လူမျိုးတွေ ဘယ်နေရာကို မလာရ၊ ဘယ်နေရာမှာ မနေရ၊ ဘယ်ကားကို မစီးရ၊ ဘယ်စားသောက်ဆိုင်မှာ မစားရ၊ ဘယ်ကျောင်းကို မတက်ရ၊ ဘယ်နေရာမှာ ဘယ်အလုပ်ကို မလုပ်ရဆိုတဲ့ လူမျိုးချင်း ခွဲခြားဆက်ဆံမှု ဖြစ်ပါတယ်။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊ မြို့ရွာ၊ ပြည်နယ်၊ နိုင်ငံအကျိုးအတွက် အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ မတူညီသော လူအုပ်စုနှစ်စုက အကျိုးတူ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ဖို့ဆိုတာကတော့ စဉ်းစားစရာပင် မလိုတော့ပါ။ အင်မတန် ရွံရှာစရာကောင်း၊ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အယူအဆဆိုးဖြစ်တာမို့ ယဉ်ကျေးတဲ့ ယနေ့လူ့ကမ္ဘာမှာ ဘယ်လိုလူသားဆန်တဲ့ လူသားမျိုးကမှ ကျင့်သုံးဖို့ တောင်းဆိုတာ၊ လှုံ့ဆော်တာ မပြောနှင့် ဒီအယူအမြင်ကို လက်ခံပါတယ်လို့တောင် မပြောရဲတဲ့ အင်မတန် ဆိုးယုတ်သိမ်ဖျဉ်းတဲ့ အယူဝါဒဖြစ်ပါတယ်။
သို့သော် ကျနော်တို့ အမိမြန်မာပြည်မှာ ဒီဝါဒဆိုး segregationကို အတိအလင်း ကြေငြာချက်ထုတ်ပြန် တောင်းဆိုရဲတဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီ ရှိနေပါပြီ။ ဘယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်လူ့အခွင့်အရေးခေါင်းဆောင်၊ ဘယ်အစိုးရဝန်ကြီး၊ ဘယ်နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေးစတဲ့ အဖွဲ့အစည်းကများ ကန့်ကွက်သံ ကြားရလေမလားလို့ နှစ်ရက်ကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။ ရှက်စရာ ကြောက်စရာကို မရှက်မကြောက် လုပ်သူက လုပ်တယ်။ ဘယ်သူကမှ မလုပ်သင့်ဘူးလို့ တစ်ခွန်းဆိုသံ မကြားရသဖြင့် မြန်မာပြည် သွားပြီလားလို့ မေးခွန်းထုတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ (RNDP၏ ဤကြေငြာချက်ကို မသိရှိသေးသူများအား မဆိုလိုပါ။)
RNDP (ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ)က ၂၀၁၂ခု မေလ (၂၆)ရက်နေ့စွဲနှင့် ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်အမှတ် ၀၄/၂၀၁၂မှာပါတဲ့ တရားမဝင် ခိုးဝင်လာသူများကို အရေးယူတာ၊ မူရင်းနိုင်ငံကို ပြန်စေတာတွေကိုတော့ လုံးဝ သဘောတူပါတယ်။ အငြင်းပွါးစရာ မရှိပါ။ သို့သော် ကြေငြာချက်ရဲ့ အမှတ်စဉ် ၆(ခ)မှာ၊ တရားဥပဒေချိုးဖေါက်သူတွေ၊ ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်သူတွေကို ထိရောက်စွာ အရေးယူစေပြီး နိုင်ငံသားအချင်းချင်း သင့်မြတ်ရေး၊ အေးချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်နိုင်ရေးကို မဖြစ်ဖြစ်အောင် ဦးဆောင်ပေးရမည့်အစား
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့ရွာများ၌ ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများ နီးကပ်စွာရောနှောနေထိုင်မှု မရှိရအောင် ဘင်္ဂလီလူမျိုးများအား သင့်တော်ရာ၌ ယာယီသီးခြားနေရာချထားရန်
လို့တောင်းဆိုထားပါတယ်။ ဒါကို Apartheid (Segregation) မခေါ်ရင် ဘာလို့ခေါ်မလဲဆိုတကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေး၊ တိုင်းရင်းသားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး၊ စီးပွါးရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဖြေကြပါ။ ဒီလောက် ဆိုးသွမ်းဖေါက်ပြန်တဲ့ ကြေငြာချက်ကို ကြားသိလျှက်နှင့် နှုတ်ဆိတ်နေခြင်း၊ လူသိရှင်ကြား မကန့်ကွက် မရှုံ့ချခြင်းသည် သဘောတူ(Consent)သည်ဟု ဆိုနိုင်သဖြင့် ယနေ့ မြန်မာ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများပေါ်တွင် သမိုင်းကြွေးတင်သွားပါပြီ။ နောင် မြန်မာပြည်ရဲ့ အခြားနေရာတွေမှာ အလားတူဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်လာရင်၊ ဖြစ်လာအောင် လှုံ့ဆော်ပြီး ဘာသာမတူ၊ လူမျိုးမတူသူတွေရဲ့ အိုးအိမ်တွေကို မတရားသိမ်းပိုက်လိုလျှင် မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများ ဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြမလဲ။
ဒီလိုတောင်းဆိုသူတွေဟာ မိမိကိုယ်တိုင်က လိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုတာကို နားမလည် တန်ဖိုးမထားရုံတင်မက ကျင့်သုံးလိုဟန်ပင် မရှိကြောင်းကို အတိအလင်း ပြဆိုခြင်းဖြစ်တယ်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်တည်လာပုံ၊ နိုင်ငံ စတင်တည်ထောင်စ ကတည်းက နှစ်နိုင်ငံ နယ်စပ်တွေမှာ လူမျိုးပေါင်းစုံတွေ ပြန့်နှံ့နေထိုင်ပုံ၊ တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ် ခွဲခြားသတ်မှတ်မှုနှင့်အတူ ပါဝင်လာတဲ့ လူမျိုးတွေကို တရုပ်၊ ထိုင်း၊ အိန္ဒိယ၊ မြန်မာစသဖြင့် နိုင်ငံသစ်တွေက လက်ခံပေးရပုံ (ခိုးဝင်သူတွေကို လက္ခံပေးဖို့ မပြောပါ။) စသည့် သမိုင်းဖြစ်ရပ်တွေကို အခြေခံလောက်မှ နားမလည်ခြင်းကို ပြပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက (၂၁)ရာစုမှာ လူသားအခြေခံပြီး လူသားချစ်စိတ်နှင့် တိုင်းပြည်ကို လက်တွေ့ကျကျ တည်ဆောက်ရမည့်အစား စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေနှင့် မညီမညွတ်ဖြစ်စေကာ တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲထိုးချမည့် အမြင်ကျဉ်းမြောင်းသော ငါ့ဘာသာ၊ ငါ့သာသနာ၊ ငါ့လူမျိုးဆိုတဲ့ မျက်ကန်းမျိုးချစ်စိတ်ကို တာဝန်မဲ့ လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ပြည်သူတွေကို အကျိုးဖြစ်အောင် အသိညာဏ်ဖွင့်ပေးရမည့်အစား အကျိုးယုတ် အသိကန်းအောင် အဆိပ်ခပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။ (ရှေးခေတ်က ဟစ်အော်လာကြခဲ့တဲ့ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို လက်သုံးပြုလို့ မလုံလောက်တော့ဘူး။ မြန်မာပြည်မှာ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်၊ ဟိန္ဒူ၊ နတ်ကိုးမှုစသည်ကို စွဲပြီး လူမျိုးရေးတရားလုပ်လို့မရဘူး။ ကိုယ်ယုံကြည်ရာ ကိုယ်ကိုးကွယ်ပြီး တိုင်းရေးပြည်ရေးမှာ ညီညီညွတ်ညွတ် စုပေါင်းလုပ်ကြဖို့ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၁၁)ရက် ပင်လုံညီလာခံမှာ လက်မှတ်မရေးထိုးမီ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ကတိပြု ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သံဃာတော်များက အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဟု ဆိုခြင်းကို နားလည်ပေးနိုင်သော်လည်း လူမျိုးပေါင်းစုံ၊ သာသနာ ပေါင်းစုံကို ကိုယ်စားပြုရမည့် နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်များက အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာဟု ပြောလာမည်ဆိုလျှင် မိမိစီးသောမြင်းကို အထီးမှန်း အမမှန်း မသိသူများ ဖြစ်ရာ၏။ လွန်ခဲ့သော (၆၆)နှစ်ကပင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံ တည်ထောင်ရေးအတွက် လက်တွေ့မကျဟုဆိုကာ ပယ်ချခဲ့သော အယူမှား၊ အမြင်မှားဖြစ်သည်ကို သတိချပ်သင့်လှ၏။)
ခေါင်းဆောင်ကြီးများအနေနှင့် ဘော့စနီးယား၊ ရဝမ်ဒါစတဲ့ နိုင်ငံတွေက လူမျိုးရေး အထိကရုဏ်းတွေကို ပြန်စဉ်းစားပြီး သင်္ခန်းစာယူကြပါ။ အခြေအနေတွေ ပိုမဆိုးလာအောင် အချိန်မီ တားဆီးကြပါ။ တိုင်းပြည်ကို လမ်းကြောင်းမှန်ကို ပြန်တင်ပေးကြပါ။ ပြန်လည်ခေါင်းထောင်ဖို့ အထင်အရှား ကြိုးစားနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီအရေခြုံ စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို တစ်နိုင်ငံလုံးက တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထု၏ နည်းမှန်လမ်းမှန်ဖြစ်သော စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် အနိုင်တိုက်ယူပါ။
အနှစ်ငါးဆယ်မှာ ရတောင့်ရခဲဖြစ်တဲ့ အခုလိုအခွင့်အခါမျိုးကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချနိုင်ဖို့လိုတယ်လို့ ဒေါ်စုက ယနေ့တင်ဘဲ ပြင်သစ်မှာ ပြောလိုက်ပါပြီ။ မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးမချနိုင်ရင်တော့ မြန်မာပြည် နောက်တစ်ချီ သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အနှစ် ငါးဆယ်လေးလောက်ပါ။
Tags: Asia, Burma, Ethnicity, Language, Myanmar, Political correctness, Politics, Racial profiling
This entry was posted on June 29, 2012 at 8:27 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.